WAXYAABAHA KUFSIGA SOO KORDHIYEY: | Voice Of Somalia
Kufsiga bahalnimo ee sannadahaan gees-ka-gees geyiga ku baahay, wax la barbardhigo iyo si loo macneeyo lama yaqaan. Qowmiyadda Soomaalida haweenku waa ka badan yihiin ragga oo sida Carabta baahi haween Soomaaliya kama jirto. Guur iyo gaabsi qofba dooqiisa si sahlan buu ku heli karaa. Kufsiga cusub waxaa ku jira mugdi iyo macne shirqool xambaarsan oo si fudud aan loo fahmi karin.
Wuxuu noqday camal-shaydaan laysugu faano iyo dhaqan xumo dalka lagu faafiyo. Guud ahaan maamullada dalka ka jira, dhaleeceyn iyo kufsigu waa aafo qaran ayey dhaafi-waayeen, ayaandarro marnaba ma asiibin meesha sartu ku quruntay iyo ciriqa aafada. Wabi qarka jebiyey oo fatahay biyihii dhulka maasheeyey haddii la dhuro iyadoo aan marka hore qarkii jabay la dhisin, taasi waa xoog doofaar lagu eryey iyo cudurka geela ku dhaca oo gammaanka laga daweeyey.
Waxyaabaha kufsiga soo kordhiyey iyo kooxaha faafiya waa in la aqoonsado kadibna ciriqa aafada la ciribtiraa. Kaabeyaasha kufsiga iyo kooxaha hirgeliya baaris kooban oo aan ku sameeyey, natiijadii waxay noqotay sidatan:
(Sababta 4aad): Ciidammada AMISOM qeyb libaax bey ka qaataan faafinta fisqiga waxayna la saf yihiin NGOley, waxay kaloo si xoog leh u faafiyaan AIDS. Gabadh gaajoon oo seddax-qad ah qado la siiyey haddii lagu qaawiyey, waa nooca kufsiga ugu xun oo ku saleysan ka faa’iideysi baahi-daran iyo saboolnimo. Hadda waxaa dalka jooga carruur ku hadaaqeysay“aabbeyaasheen magacooda AMISOM ha asteyso”. Kufsiga dadban iyo fisqiga AMISOM dalka ku baahisay hadduu sii socdo shan sano oo dambe, haweenka AIDS la qaadsiiyey iyo carruurta ay dhaleen waxay noqon qabiil ballaaran oo lagu magacaabi doono “Beesha AIDS-AMISOM” heerka AIDS-kuna wuxuu gaari doonaa 20%. Inkaar-qabeyaasha indhashareerka leh ee subax walba ku kallaha xeryahooda ee ku andacooda isbitaalka AMISOM baan u soconaa, mar ciidammada shisheeye ayey u yihiin addoon galmo “sex slave”, marna bulshada ayey AIDS ku faafiyaan. Allow Soomaali ka samatabixi siriqda gumeysiga.
(Sababta 7aad): Guuldarradii dagaalkii 77 kadib carruurtii dhalatay waxay ku garaadsadeen kuna indhafureen fowdo iyo jahawareer, dowlad la’aan iyo dad akhlaaq ahaan u burburay isla markaana “kufsi-dil-dhac” ay nolol maalmeedka ka mid yihiin. Dhallinyaradaasi waxay noqdeen dilaa-sare iyo dugaag aan waxba ka naxin, una haliilaya inay naftooda ku halligaan“tahriib-badaha-isqarxin”. Nin baa yiri abkey doolli dilow, dad nool maas u daahaa iyo Allihii ugaas diley inta kale waa u sahal. Wiil ay la fududahay inuu naftiis macne la’aan iyo si fudud u halligo “kufsi-dil-dhac” shaah la cabay kala fudud.
Waxba yaan gocashadu ila gudbine aan qoraalka soo gunaanado. Magaalo gabowday ayaa guddi Injineero ah loo xilsaaray inay kasoo talo bixiyaan “in lagu sii noolaan karo iyo in kale”. Baaris muddo dheer qaadatay kadib waxay duqii magaalada u soo gudbiyeen warbixin ka kooban seddax eray oo ah “magaalada hallaga guuro”.
Seddaxda eray een bulshada u soo gudbinaa waxay yihiin, “wixii dhiiglahow kaca” oo ka dhiidhiya dhegxumada. Soomaalida silica iyo saranseerku la degay waa inay si degdeg ah ugu tallaabsato laba ficil oo maanta muhiim ah:
Mar baa haweenku yihiin horror magac-xumo iyo musiibo kale bulshada u soo hooya. Sidaas awgeed haweenka xadgudbay ee ka baxay xayndaabka anshaxa suuban iyo ku dhaqanka shareecada waa in xakame bir ah lagu giijiyo oo la tirtiro naaneysta xun ee haweenka Soomaaliyeed lagu suntay “cheap clean and hot cake”. Ninkii aan muxaramaadkiisa fisqiga ka reebin waa DAYUUS, xadiis Nabi Muxamed scws ka sugnaaday wuxuu qeexayaaDAYUUS ma uriyo jannada udugeeda. Soomaaliyeey hadafkeennu ha ahaado joojinta kufsiga haweenka lagu kadeeday iyo xaqiijinta karaamadooda. Soomaaliyeey hadafkeennu ha ahaado in gacan bir ah lagu qabto inkaar-qabeyaasha indhashareerka leh ee aafada AIDS faafiya isla markaana sumcad xumada u soo hooyey haybadii haweenka Soomaaliyeed ee beri ahaan jirey horyaalka xishoodka iyo dhowrsoonaanta.
MAALKA IYO CARUURTA GAALADA:Qisas Ka Dhacay Yurub.HA U TAHRIIBIN.